State Iowa odeefanno dabalataa waaye talaali corona virus irrati akka namni argatuuf guyyaa borii we | KWIT
Akkasumas state talaali dabalata jiraatota Iowa umriin isaani deemuf keenudhaf yaalu jiru. March 8 irraa jalqabee 211-call center akka banamuufi gaafi fi gargaarsa adda addaa akka kennuu jalqaban himani jiran.
South Dakota Gov. Kristi Neonmi abbaa seera state Iowa akka hojii isaa irraa bu’u dhiiba kan itti godhaa jirani dabalaa deema kan jiru yoo ta’u balaa diingata irrati qorannoon dabalataa akka dabalamuu gad dhiisudhaf waada akka galanii waada galani jiru barreesituun seera akka hojii irraa ariamtuu. Jason Raynsborg (rounds-burg) dhahuu september keessa naannawa baadiyatti nama dhahuudhan ajjeese jira. Noem akka jetteti qoranoo erga goote booda hojii isii gad dhiiftu himte jirti. Secretary public safety akka jedheti Raynsborg akka hojii irraa ari’uu barbaadu himee jira, sababni isaa ummata eegun barbaachisa akka tae himee jira.
Abbaan seera Iowa dargagootaf hin fayyada jedhani kan amanan nadaaji haaromfame hisaaba isaa senate agriculture commite irraa baasani jiran.
Gatii namaa hin gallee Iowa nadaajidhan keessati bakka ethanol fi biodiesel-blended kan soqamu ta’a. garuu bakkeewan marattuu nadaaji tokko nadaaji biraa malee gurguramuu ni danda’ama. Warra chirchaarodhaf gibiri kan dheeratu ta’a.